Xarumaha Dowladda ee Magaalada Beledweyne oo Lala wareegay -
Xarumaha Dowladda ee Magaalada Beledweyne oo Lala wareegay
Wararka Aaan ka heleyno Magaalada beledweyne ee Xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in Ciidan hubaysan ay la wareegeen Xarumaha Dowladda ee Magaaladaas ku yaala.
Ciidankan lawareegay Xarumaha dowladda ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin ciidanka Dowladda soomaaliya ee ku sugan beledweyne.
waxaana sababta lagu sheegay in Cali Cabdulaahi cosoble oo dhowaan halkaas gaaray ka dibna shaaciyay in Maamulkiisa meeshaas kaga araminayo asaga oo dhowaan Xildhibaanada Hir-shabeele kal soonida kala laabteen.
Dhinaca kale waxaa la sheegayaa in raashiin Mucaawano ah oo ka yimid dhanka Doladda Turkiga lageeyay Beledweyne ayadoo ay wadaan Mas`uuliyiin ka tirsan Hir-shabeele ka dibna Cali cabdulaahi uu soo jeediyay asagoo sheeganaya madaxweynaha Hir-shabeelle uu raashiinkaas uu qaabiyo arintaas oo ismaan dhaaf ka bilowday.
Warkale waxaa uu sheegayaa in Cali Cabdulaahi ay u badan tahay in laga soo saaro Beledweyne si aaney saameyn ugu yeelanin Doorashada la qorsheynayo.
Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa horay u sheegay in asagu uu yahay Madaxweynaha Rasmiga ah ee hir-shabeele sharcidarana ay tahay baarlamanka Maamulkaas qaabka ay u mareen Xil ka qaadistiisa
Related Items:Featured, Xarumaha Dowladda ee Magaalada Beledweyne oo Lala wareegay
DEG-DEG:Xildhibaan Ka mid ah baarlamanka Aqalka Hoose oo Ka badbaaday isku day dil ah
DEG-DEG:Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Shirkoodii soo idlaaday iyo Qalbi Dhagax oo Shirka Ku Saabsanaa Akhri war Saxaafadeedka